Filtrer les éléments par date : lundi, 20 janvier 2020
lundi, 20 janvier 2020 10:04
Taom-pambolenkazo: Natomboka taty Sakaraha ny an’ny Faritra Atsimo Andrefana
Zana-kazo 55 000 fototra no novolena amin'ny velaran-tany 100 hekitara taty Sakaraha ny alahady 19 janoary, fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolenkazo 2020. Nandray anjara mavitrika tamin'izany ny teo anivon'ny Ministeran'ny Tanora sy Fanatanjahan-tena, izay tarihin'Atoa Minisitra Tinoka Roberto, sady Minisitra « coach » ny Faritra Atsimo Andrefana.
Nifarimbona tamin’izany ny mponin’i Sakaraha sy ireo olo-manankaja rehetra amin'ny faritany Toliara sy ireo sampandraraha misy ao amin'ny Faritra Atsimo Andrefana.
2000 hekitara ny toerana azo volena hazo ao amin’ity lemaky Sakaraha ity, ary mbola hitohy ny asa sy ny ezaka fambolena. Hazo 60 tapitrisa fototra no tanjona hovolena amin’ity taona ity, manerana an’i Madagasikara hanamarika ihany koa ny tsingerin-taona faha-60 niverenan’ny fahaleovantenam-pirenena.
lundi, 20 janvier 2020 10:02
Martin Luther King Jr.: Tsaroana isaky ny Alatsinainy fahatelo amin’ny volana Janoary
Andro tsy fiasana natokana hahatsiarovana an’i Martin Luther King Jr. anio ka mikatona ny Masoivoho Amerikana, araka ny fampahafantarana nataony.
Tamin’ny taona 1983 ny Filoha Amerikana Ronald Reagan no nanasonia ny didim-panjakana izay nametraka ho andro manokana, tsy hiasana nefa handraisan-karama, ho fahatsiarovana ny Dr King ho an'ny Amerikanina.
Izy no Amerikana mainty hoditra voalohany teo amin’ny tantara nanokanana androm-pirenena toa izao. Andro izay nankalazaina voalohany indrindra tamin’ny taona 1986, isaky ny Alatsinainy fahatelo amin’ny volana Janoary, izay daty manakaiky ny 15 Janoary fitsingerenan’ny taona nahaterahan’ity mpitolona ho an’ny zon’olompirenena ity.